Hordhaca ku lanka u dhaxeeya Man City vs Schalke lugta labaad ee wareega 16ka ee Champions League – Walaal24 Newss
Pep Guardiola ayaa sheegay in Manchester City ay weli shaqeyneyso marka ay wajahayaan Schalke lugta labaad ee wareega 16ka Champions League Caawa oo Talaada ah.
City ayaa ku jirta boos adag ka dib markii ay soo dhamaatay wareega xiga ee ay ku badisay 3-2 ciyaar ka dhacday Jarmalka.
Natiijadaan ayaa la micno ah in Schalke ay u baahan tahay inay ugu yaraan labo gool ka dhaliso Etihad si ay ugu soo baxdo wareega 8da, lakiin waxa ay hogaanka ku hayaan lugta hore 2-1 ka hor inta aysan City garoonkeeda dib ugu soo laaban.
“Waxa dhacay ciyaartii ugu horeysay ayaa dhici karta midka labaad” ayuu yiri Guardiola. “Taasi waa sababta aysan u badalin wax badan oo aan samayno, weli wali waa shaqeyneynaa.
“Wax walba ayaa ka dhici kara tartankan, waa inaan sameynaa dadaal aan caadi aheyn oo ku aadan xaaladaha xasaasiga ah si aan u dhex marno, waan isku dayi doonaa oo aan ciyaari doonaa kulan qumman oo aan sameyno waxa aan u baahanahay inaan sameyno.”
Schalke ayaa dhawaan ku jirta qaab ciyaareed liita, iyadoo laga badiyay shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu danbeysay, oo ay ku jirto guuldaradii ka soo gaartay City.
Waxaa lagu garaacay 4-2 kooxda Werder Bremen jimcihii, waxaana ay ku jirtaa kaalinta 14aad ee horyaalka Bundesliga, afar dhibcood ayaana ka sareysa booska nasashada.
Manchester City waxaa ka maqan labada ciyaaryahan Nicolas Otamendi iyo Fernandinho.
Labada ciyaaryahanba waxay heleen kaararka kulankoodii ugu horeeyay, inkastoo Fernandinho uu dhaawac ka soo gaaray xaalad kasta. Aymeric Laporte, oo keydka fadhiyay kulankii Watford dhamaadkii Isbuuca, ayaa laga yaabaa inuu soo laabto ka dib dhaawac muruqa ah.
Daafaca kale John Stones ayaa la qiimeyn doonaa, laakiin kubadsameeye Kevin De Bruyne iyo goolhaye Claudio Bravo (Achilles) ayaa maqan.
Daniel Caliguiri (canqawga) iyo Omar Mascarel ayaa ka maqnaan doona Schalke, iyadoo Alessandro Schopf uu garoomada ka maqnaan doono xilli ciyaareedka.
Ciidanka Xoogga Dalka oo kooxda Al-Shabaab gacanta kaga dhigay degaanno Hoostaga G/Shabellaha Hoose
Dhageyso: Wasiirka Cadaaladda XFS oo manta Golaha Aqalka sare ka hor akhriyay Hindise sharciyedka la dagalanka Masuq-maasuqa